दाँतको सुरक्षा - प्रश्नोत्तर - प्रकाशितः चैत्र २४, २०७३ - नारी
डा.सीता न्युरे भट्ट
अर्थोडन्टिस्ट तथा निर्देशक, हिमाल डेन्टल हस्पिटल, धुम्बाराही
कस्ता दाँतमा तार लगाइन्छ ?
बाङ्गा–टिङ्गा, बाहिर निस्किएका, छिद्रा परेका, अपरिपक्व आदि दाँतमा ब्रसेस (तार) गरिन्छ ।
यसको कुनै साइड इफेक्ट छ कि ?
त्यति हानिकारक साइड इफेक्ट हुँदैन तर सरसफाइमा ध्यान पुर्‍याइएन भने समस्या उत्पन्न हुने भएकाले दाँतमा तार बाँधिसकेपछि हाइजिनका सम्बन्धमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
यसको विकल्प केही छ कि ?
तार बाँध्न नचाहनेहरूका लागि क्राउनिङ वा भिनेरिङ गर्ने तथा लेमिनेट, फिलिङ आदि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यी विधि दुई दाँतका बीच थोरै ग्याप भएका साधारण केसमा मात्र उपयुक्त हुन्छन् ।
तार लगाउँदा कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?
विशेष ध्यान दिने भनेको सरसफाइमै हो । त्यसबाहेक साह्रो (छुर्पी, सुपारी आदि) खानु हुँदैन । बेला–बेलामा फलोअप गराइरहनुपर्छ । घरमै लगाउने एप्लाइनसेस डाक्टरको सल्लाहअनुसार लगाइएन भने उपचारको अनुकूल परिणाम नआउनसक्छ ।
यो कुन उमेरकाले लगाउन सक्छन् ?
प्राय: १२ वर्षपछि लगाउन मिल्छ तर कहिलेकाहीँ दाँत मात्र नभई दाँतभित्रको हड्डीमा समेत समस्या हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सानै उमेरदेखि सुरुवात गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बर्सेसलाई कतिदेखि कति समयसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ ?
समस्या हेरी समय निर्धारण गरिन्छ । सामान्यत: ६ महिनादेखि ३–४ वर्षसम्म पनि राख्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तारमा अत्याधुनिक प्रविधि भनेको के हो ?
वयस्क, सामाजिक व्यक्तित्व, सेलिब्रेटी तथा अन्य प्रौढलाई तार बाँधेर हिँड्न असहज हुने भएकाले हिजोआज सेरामिक ब्रेसेस (दाँत रंगको), लिङ्गुयल ब्रेसेस (भित्र अर्थात् जिब्रोतिरबाट लगाउने), इनभिजिलाइन ब्रेसेस (नदेखिने अर्थात् लगाएको थाहा नपाइने) जस्ता सुविधा उपलब्ध छन् । दाँत वा हड्डीका कारण वयस्कहरूको मुखको आकार नमिलेको र हड्डीको ग्रोथ कम वा बढी भएको अवस्थामा सर्जरी गरेर वा ब्रेसेस राखेर मिलाउन सकिन्छ ।